Ny tsiambaratelo maloto amin'ny marketing amin'ny mailaka sy ny mpanome tolotra Internet | Martech Zone
Misy tsiambaratelo maloto ao amin'ny indostrian'ny mailaka. Ilay elefanta ao amin'ny efitrano izay tsy misy miresaka. Tsy misy olona afaka miresaka momba izany noho ny tahotra ny valifaty ataon'ny olona izay heverina fa hikarakara ny Inbox-nay.
SPAM TSY MISY HATAONAO AMIN'NY FAHETRENA
Marina izany. Eto ianao no naheno azy. Averiko ihany…
Averina indray mandeha…
Fa Doug… inona no lazainao? Mahatsiravina izany! Manohitra izay ambaran'ny indostria iray manontolo amintsika izany. Manohitra inona izany mpanome tolotra aterineto lazao aminay. Manohitra inona izany ESPs lazao aminay. Manohitra izay fantatsika momba ny SPAM aza.
Ny marina dia hoe SPAM no tsy mailaka tsy nangatahina. SPAM dia tsy mailaka nalefa tsy nahazo alalana. Inona no SPAM is is tsy ilaina mailaka. Tsy ilaina.
Androany, afaka misoratra anarana mailaka avy amin'ny loharano malaza aho, antsoina hoe GOODMSG. Omeko azy ireo ny alalana handefa mailaka amiko matetika araka izay itiavany azy ireo, eny fa na dia avelany hanao pirinty tsara aza, handefa atolotra ahy amin'ny anaran'ny orinasa 'anaovan'izy ireo orinasa'.
GOODMSG dia manome ny adiresin'ny orinasany isaky ny mailaka.
GOODMSG dia manana valopy fananganana feedback izay mandika ny lozisialy tsy mandeha ho azy.
GOODMSG dia mampiseho rohy tsy misy famandrihana.
GOODMSG dia mamela ny fitadiavana DNS miverimberina.
GOODMSG dia miangavy mba hofidiana fotsy amin'ny mpamatsy serivisy Internet rehetra (izay manolotra).
GOODMSG dia miangavy ny consultants Deliverability mba hitazonana ny fifandraisana amin'ireo ISP.
Aorian'ny fahazoako 6 volana amin'ny mailaka, tsindrio ny bokotra Junk Email an'ny ISP-ko rehefa mandefa tolotra mandringa i GOODMSG. Ny mpamandrika hafa dia manao toy izany koa.
GOODMSG, ilay mpanao dokam-barotra malaza, lasa SPAMMER fotsiny. Mifototra amin'ny fahazoan-dàlana, opt-roa, manara-penitra CAN-SPAM, 1-tsindrio tsy hisoratra anarana… nanao ny zava-drehetra tsara izy ireo, nefa izao dia SPAMMER izy ireo.
Amin'ny maha SPAMMER azy ireo dia tafiditra anaty lisitra mainty. Voasakana izao ny adiresy IP-n'izy ireo. Ireo mpanjifany hafa izay te tsy hahazo izany ny mailaka. Simba ny lazan'izy ireo. Angamba nivadika ESP vaovao izy ireo. Angamba nivadika adiresy IP vaovao ry zareo. Tsy maintsy manao zavatra izy ireo, satria tsy afaka tafiditra ao amin'ny Inbox ny mailaka nomeny. Angamba lasa tsy manao asa mihitsy ry zareo. Ny heloka vitany? Hafatra malemy, tsy tadiavina.
Iza no omena tsiny amin'izany? GOODMSG? Ny mpisoratra anarana?
Ny tompon'andraikitra amin'izany dia ny Mpanome Tolotra Aterineto, indrindra ny ISP mpamatsy mailaka lehibe - Yahoo !, Google, Live (Hotmail, MSN), AOL. Tompon'antoka izy ireo satria tsy nahavita niaro antsika tamin'ny tena SPAM. Mampiasa rafi-ditra tsy misy kilema izy ireo, tsy mizara angon-drakitra, tsy manome fitaovana ho an'ny loharanom-baovao malaza ho tonga mpitantana tsara. Raha ny tokony ho izy dia tsy raharahian'izy ireo ny mailaka an'arivony tapitrisa sy maro an'arivony maro izay alefan'ny tena SPAMMERS izay tsy manaraka ny lalàna, tsy miraharaha ny lazany, tsy miraharaha ny fahazoan-dàlana, manodina ny adiresy IP azy ary mandingana ny fanamarinana sy ny mizana rehetra mpivarotra mendri-kaja ampiasaina.
Mitovy amin'ny famantarana tsy misy fanafody amin'ny sekoly ambaratonga faharoa. Ny olona tsy misy fanafody dia ireo olona izay efa tsy misy fanafody. Ireo mpivarotra rongony dia mbola mandeha amin'ny sisin-dàlana sy lalantsara ihany, mihomehy amin'ireo fambara rehefa mandalo azy ireo.
Niresaka momba ny fahazoan-dàlana aho teo aloha. Ny olana amin'ny fahazoan-dàlana dia ny tsy fisian'ny rafitra apetraka ho an'ireo ISP hahazoana antoka fa nanome alalana ianao. Mila fahazoan-dàlana ho toy ny elanelana manohitra ny mety amin'ny tsy fitaterana mailaka sy ny fanaovana tatitra mailaka tsy misy dikany. Na izany aza, ny ISP sy ny ESP dia TSY MISY mizara ny fizotry ny fahazoan-dàlana.
Misy olona mila manomboka manontany ny antony. Mila mamaly ireo hafatra SPAM amina miliara mandalo hatrany ny olona iray na dia tsy afaka mandalo aza ireo mailaka 'tsara' ary mijaly ireo orinasa. Ny ISP dia mitohy hatrany momba ny fahazoan-dàlana, alalana, alalana. Tsy miraharaha ny fahazoan-dàlana izy ireo… ny olona marobe no manindry izany bokotra mailaka tsy misy dikany izany. Izay ihany no iasan'izy ireo. Amin'ny maha-mpivarotra anao anao, mametraha hafatra mailaka ratsy ho an'ny mpanjifanao, ary mitandrema! Ho voasakana ianao ary homena anarana hoe SPAMMER afaka fotoana fohy.
Ny tokony ataon'ny ISP hiadiana amin'ny tena SPAM
Manomeza API opt-in ho an'ny mpanome tolotra mailaka na mpanao dokam-barotra izay maniry handefa mailaka am-pahamendrehana.
Mizarà data momba ny opt-in amin'ireo ISP hafa hahazoana antoka fa tsy voasazy ireo mpivarotra tompon'andraikitra.
Ajanony ny SPAMMERS tsy hampiasa ISP handefasana mailaka! Fantatrao ve fa ny Etazonia no SPAMMER ratsy indrindra? Tena milaza amiko ve ianao fa afaka mahita mpanao sary vetaveta mandritra ny ora maro isika, saingy afaka miasa mandritra ny taona maro ny SPAMMERS? Milaza amiko ianao fa tsy afaka mahita sy mampiato ity volan'ny fivezivezena tsy mampino ity ny fanaraha-maso ny fitaovana.
Raha avelako hitatitra zava-mahadomelina ao anaty fiarako ny olona, ​​dia migadra aho. Fa maninona ireo ISP izay mitondra SPAM no tsy tompon'andraikitra?
Omeo fomba iray handefasana ireo mailaka ho azo antoka amin'ny Inbox. Tsy fomba fifandraisana faharoa intsony ny mailaka. Mahazo fampandrenesana momba ny trosa sy fampandrenesana amin'ny banky ao anaty boaty. Tsy azo ekena fa ireo mailaka ireo dia hiseho ao anaty folder Junk Email.
Raha mijanona tsy miseho amin'ny trano fitahirizanao ny UPS, FedEx ary ny USPS handefasana ny vokatrao dia hitory azy ireo ianao. Misy olona hanenjika ISP tsy ho ela noho ny tsy fandefasana mailaka mifototra amin'ny fahazoan-dàlana sy manaraka ny lalàna rehetra. Ireo orinasa ireo dia mila ampamoahina noho ity korontana nampiditra azy ireo ity ary tsy nety namoaka anay.
Tags: fanateranamailaka mailakaESPISPmailaka junksivana mailaka junkamin'ny spam
Lahatsoratra bilaogy isa 1,000 XNUMX - mivantana avy amin'ny Techpoint!
9 Nov 2007 amin'ny 3:12 maraina
Lahatsoratra tsara Douglas. Aparitaho ny teny!
9 Nov 2007 amin'ny 9:02 maraina
Nanaiky. Karazan'ireto mailaka mpikarakara rehetra ireto tonga amiko. Argghhh!
9 Nov 2007 tamin'ny 1:39 PM
Mampatsiahy ahy lahatsoratra iray avy amin'ny CEO an'ny Silverpop momba ny fomba tokony hisolo ny "fahazoan-dàlana" amin'ny "fiandrasana."
11 Nov 2007 amin'ny 5:43 maraina
Lahatsoratra tsara, na dia mieritreritra aza aho fa ny hevitrao # 4 dia mitondra mankany amin'ny lalana malama. Raha toa ka tompon'andraikitra amin'ny fandefasan'ny mpanjifany ny ISPS, dia ho lasa mpandala ny nentin-drazana izy ireo raha ny amin'ny mpanjifany.
Na, amin'ny teny hafa, tsy azonao atao ny manome tsiny ny biraon'ny paositra noho ny baomba paositra. Tianao hogadraina ve i Dell rehefa misy mpijirika mampiasa ny solosainany hivarotra kaonty amin'ny banky? Tokony ho tompon'andraikitra amin'ny heloka bevava karakarain'ny telefaona finday ve ny AT&T? Tsia. Ny mpitatitra dia tsy tokony ho tompon'andraikitra amin'izay entina. Ilay mpandefa dia.
Alao an-tsaina ange raha toa ka afaka manefa vola ho an'ny spammer fanta-daza ireo orinasa noho ny famokarana very. Miaraka amin'ny lalàna marina, mahery (sy: ampiharina), ny spam dia tokony ho zavatra taloha.
11 Nov 2007 amin'ny 9:14 maraina
Hevitra tena tsara izany, modifoo. Azo antoka fa zavatra iray izay tsy maintsy porofoina ny fikasana. Raha ISP nahalala nivarotra bandwidth izy ireo mba hampiasa spam, tokony ho tompon'andraikitra izy ireo.
Mar 12, 2011 ao amin'ny 4: PM PM
Ny toe-tsaina sahala amin'ireo voalaza ao amin'ity bilaogy ity no tena antony mahatonga ny marketing IS-mail an'ny polisy ISP: ireo izay mandefa mailaka tsy takiana dia jamban'ny tsy fitiavany mihinana fa tsy manao ratsy izy ireo. Manana vaovao ho anao aho, moron: ny famaritana ny spam dia misy ifandraisany amin'ny alalana. Ny olona toa anao dia tsy hahatakatra izany mihitsy, na izany aza, ka izany no mahatonga ny ISP tsy faly afa-tsy ny manakana anao ary mamela anao hiloka fa vita mafy mandra-pahatongan'ny omby.
Rachel, tsy maintsy nandingana ilay lahatsoratra manontolo ianao. Afa-tsy ny ampahany malahelo, ny tiako holazaina dia ny tena mahatezitra anao. Azafady mba makà fotoana hamakiana ny lahatsoratra ENTIRE.
May 22, 2016 amin'ny 3: 25 AM
Lahatsoratra mahafinaritra be. 9 taona eo ho eo taty aoriana vao mainka niharatsy ny toe-draharaha. Raha ny fahitako azy dia ny orinasam-pandraharahana goavambe toa an'i Google mifehy bebe kokoa izay ataontsika, lazaintsika na eritreretintsika. Izany no lafiny eritreritra ny amin'ny sivana ho an'ny sivana ary natao hanakanana ny fisainana misaina izany ary hahatonga antsika hitelina ny propoganda rehetra sy ny lainga izay tian'ny masinin'orinasa maneran-tany hamelomana antsika - amin'ny fampiasana Governemanta "ambony" ho mpitantana azy ireo. Mampatahotra zavatra nefa mampino ianao naheno kely resaka momba an'io. Ny maro an'isa - ny ondry dia toa manaiky azy rehetra ary amin'ny lafiny sasany dia manompo ny Googles an'izao tontolo izao Andriamanitra. Mazava ho azy fa tsy hisy soa ho avy amin'izany. Ho an'ireo mpivarotra mailaka ara-dalàna - sy ireo izay nisoratra anarana tamin'izy ireo satria TIAN'izy ireo ny atiny (izany hoe atiny mahasoa, mahasoa ary manome hery) mirary soa! Ho rava ny orinasanao. Ity vondron'orinasa amorika manerantany ity dia TSY te hanana hery amin'ny lafiny rehetra. Ary noho izany tsy vakiana fotsiny ny mailakao, hanakana azy ireo tsy halefa izany - hosoka amin'ny mailaka amin'ny tena hevitr'ilay teny.
Angamba ny orinasa an-tserasera dia tokony hamantatra ny mailaka rehetra izay tsy voaterina ary hametraka sanda dolara ao aminy ohatra $ 1 isaky ny mailaka amin'ny fidiram-bola / sandan'ny asa very ary hitory amin'ny hetsika iraisam-pirenena tsy fandefasana. Mety hahatonga azy ireo hieritreritra izany! Ka raha misy mailaka ara-dalàna 10,000,000 tsy voateraka manerantany isan'andro dia hitombo ve ny fitakiana?